Montes Universales, ihe niile ị chọrọ ịma | Network Meteorology
Taa, anyị ga-ekwu maka ugwu ugwu ọzọ dị oke mkpa na mpaghara Iberian Peninsula. Ọ bụ ihe gbasara Ugwu Universal. Ọ bụ usoro ugwu nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke usoro Iberian. Mgbatị ya na-ekpuchi akụkụ buru ibu nke mpaghara Aragonese, Sierra de Albarracín na Teruel na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke Alto Tajo, n'etiti Guadalajara na Cuenca. Ọ bụ mpaghara a maara nke ọma maka ọtụtụ ụzọ ụkwụ na njem ije.
N’isiokwu a, ị ga-amụta maka njirimara na njirimara ala nke Ugwu Uwa nile nakwa otu n’ime ụzọ ụkwụ kachasị mma ị nwere ike ime. Want chọrọ ịmatakwu? Anyị na-akọwa ihe niile ebe a.
2 Montes Universales, ebe a mụrụ Tagus
3 Utezọ gafere na Ugwu Universal
4 Bọchị nke abụọ nke ụzọ
Ugwu Universal nwere ụfọdụ n'ime njirimara kachasị ike nke mpaghara ugwu ugwu nke Spain. Ọnụ kasị elu o nwere bụ n'etiti elu 1.600 na 1.935 mita. N'ugwu ndị a bụ isi iyi nke osimiri Guadalaviar. A maara osimiri a dị ka Turia ozugbo ọ banyere osimiri Alfambra n'obodo Teruel.
Ugwu niile a hụrụ na usoro ihe a ka a haziri n'Ugwu ọdịda anyanwụ na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ n'ime nnukwu mpaghara ime obodo Iberia. N'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ ya na Caimodorro massif gbara, onye afọ ole atụmatụ ya si na Paleozoic pụta. Na mgbakwunye, ọ bụkwa ókè-ala Loma Alta de Villar del Cobo. N'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ, ha na ugwu Cuenca na-asọda na n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na ndagwurugwu Guadalaviar.
Anyị nọ na mmiri ya dị na osimiri dị mkpa nke Alto Tajo. A mụrụ onye a n'obi nke Universal Mountains na, n'ihi nke a, ọ bụ nnọọ ama. Osimiri Tagus bụ nke kasị ukwuu na peninshula dum. Ha nwekwara ndị Levantines mejupụtara Turia na Júcar.
Ma ugwu-ya nile, ka emere site na nkpuru osisi ndi n fromweta site na Jehova Mesozoic. Areasfọdụ ebe nwere plateaus dị larịị nke Jurassic nwere nnukwu nkwado. Karst teren a kacha mara amara maka ọdịdị ya dị iche. Na Loma Alta na Griegos anyị na-ahụ ịba ụba nke ubi nke mmiri mmiri na lapiaz.
N'ebe ndịda nke Paleozoic nucleus ụfọdụ synclines synclines nke sitere na Cretaceous kwekọrọ. Fọdụ ọka ndị a kwụsiri ike na-edozi onwe ha na-apụta ma na-agbadata site na akụkụ nke ndagwurugwu yiri kredit, n'ihi usoro ọdịiche. N'ime ụlọ ọrụ karst anyị na-ahụ ebe mmiri na-emighị emi nke nwere ụfọdụ ihe ọmụmụ osimiri. Isi ihe ọmụmụ ndị a dị n’Ugwu Universal.
Montes Universales, ebe a mụrụ Tagus
Ọ bụghị naanị na a mụrụ osimiri Tagus na Montes Universales (nke a maara dị ka nke kachasị ogologo na peninsula dum) kamakwa Cabriel na Guadalaviar. Nke a na-eme Ugwu Ugwu bu ebumnuche ndi njem nleta na ime obodo, ime njem na njem nleta. Maka ịgbazite, enwere ọtụtụ ụlọ iji nọrọ na ngwụsị izu na ndị ezinụlọ na ndị enyi, nnukwu ụzọ ndị mara mma na ebe niile iji nwee anụ ọhịa ma tufuo ọrụ.
N'ebe ndị a, usoro ọdịnala ọdịnala pụtara ìhè, nke na-ewepụ anyị na mpaghara oge a. Anyị nwere ike ịhụ nnukwu ọrụ na ụgbọ okporo ígwè, ala ndị na-ahịhịa ahịhịa ndị ọzọ na ọhịa pine, wdg. Ọzọkwa, transhumance na-eme n'oge ochie. Okirikiri ala a na-emekọ ihe ọnụ n'ihi oke ikuku na imi mmiri na-enye ụdị dị egwu. Okwesiri igha izu ike ma nwee obi uto.
E nwekwara ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie, ebe a na-anụ ụtọ ọtụtụ nri pụrụ iche n’obodo a, na ịga ebe ndị ọzọ na-agba ịnyịnya na ịgba ịnyịnya ígwè n’ime obodo. Anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu ụzọ kachasị mma enwere ike ịme site na Ugwu Universal.
Utezọ gafere na Ugwu Universal
Zọ ahụ na-ewe izu ụka zuru oke. Nkwupụta ahụ bụ ịmalite ụzọ site na Mirador del Portillo. Anyị nwere ike ịhapụ ụgbọ ahụ gawa ije n'echiche nke nwere ọnọdụ. Ọ dị na elu nke 1.800 mita, nke ga-enye anyị ọdịdị dị egwu nke okike na ihe niile gbara ya gburugburu. Site na nke a, anyị nwekwara ike ịchọpụta ụfọdụ isi ihe masịrị anyị site na ịdị adị nke ụfọdụ ogwe ngosi na-egosi anyị ebe anyị kwesịrị imesi ike ịhụ ụzọ.
Anyị na-aga n'okporo ụzọ iji gbadaa na ndagwurugwu Tagus. N'ebe a anyi choputara uzo ozo nke ala ahihia na oke osisi pine. Ọwa ebe a mụrụ Tagus River ka a gosipụtara n'ụzọ zuru oke ma anyị nwere ike ịhụ ya nke ọma. Ebe a bụ ebe osimiri ahụ bidoro ịnata onyinye izizi nke mmiri nwa oge. Ọ bụ ezie na a gụrụ ya dị ka isi iyi nke Tagus, ị nweghị ike ịhụ ala mmiri, mana ọ bụ onyinye mbụ mmiri ga-amalite isi ebe ahụ na-asọ. ruo mgbe ị na-ejegharị na 1072 kilomita na Spain ruo na Lisbon.
Anyị na-aga n'ihu na-aga n'okporo ụzọ na Frías de Albarracín. Anyị na-eme njem kilomita atọ tupu anyị erute obodo ahụ ma anyị ga-ahụ gị ụfọdụ ọhịa ọhịa pine ndị yiri nnukwu olulu n’ime ala. Ọ bụ Sima de Frías. A na-echebe mgbidi ahụ site na ngere osisi. Ọ dị mita 80 n’obosara na ihe dịka mita 60 n’omimi. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ya nke ọma, anyị ga-agba ya gburugburu.
N'ehihie anyị ga-enwe atụmatụ dị jụụ karị. Anyị ga-eleta obodo ndị Gris na gburugburu ebe obibi. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị elu na mpaghara peninsula dum. Ọ dị mita 1600. Ga ahụ onwe gị ebe ala ahihia gbara gburugburu ebe ehi dị ọtụtụ.
Bọchị nke abụọ nke ụzọ
Anyị gara ịchọ Campo de Dolinas de Villar del Cobo. Anyị ga-ahụ oke ịda mba nke ihe dịka mita 350 na mita 50 miri na obere ahịhịa. Akụkụ ndị a juru ọbụna igwefoto na-enweghị ike ijide ihe niile.
Anyị nwere ike mezue ụtụtụ site na ịga na Museum Trashumacia nke di na etiti obodo Guadalaviar. Iji mechie izu ụka, anyị ga-eleta obodo nke Villar del Cobo ebe anyị nwere ike ịhụ ihe atụ nke ụkpụrụ ụlọ ọdịnala nwere facade na-acha ọcha na ya na ebe ọrụ igwe na-apụta.
Enwere m olileanya na site na ndụmọdụ ndị a ị ga-ekpori ndụ na ngwụcha izu ụka na Ugwu Universal.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Universal